Puntland oo sheegtay in la musuq maasuqay dhaqaalo loogu talo galay dad uu saameeyay Ayaxa | Banaadir Times
HomeUncategorisedPuntland oo sheegtay in la musuq maasuqay dhaqaalo loogu talo galay dad...
Puntland oo sheegtay in la musuq maasuqay dhaqaalo loogu talo galay dad uu saameeyay Ayaxa
Dowlad goboleedka Puntland ayaa shaciyay in Ayaxa uu dhibaato farabadan ku haayo degaano ka tirsan Maamulkaas, isla markaana iyaga aysan awoodin waxka qabashada Ayaxa.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Deegaanka Beeraha iyo Isbadalka Cimilada Maamulka Puntland Saynab Ismaaciil Maxamed ayaa sheegay in xilligan Ayaxa ku habsaday degaannada Puntland uu aad u farabadan yahay loona baahan yahay in lag hortago.
Waxaa ay sheegtay in dalagyada Beero ku yaal degaannada Puntland uu Ayaxa baabi’iyay, sidoo kalena ay jirto in Hay’ado iyo dad kale ay meelo kalo marsiiyeen lacago loogu talo galay dadka uu saameeyay Ayaxa.
Ugu dambeyn Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Deegaanka Beeraha iyo Isbadalka Cimilada Maamulka Puntland Saynab Ismaaciil Maxamed waxaa ay sheegtay in ka Wasaarad ahaan ay wadaan dadaalo ay uga hortagayaan in Ayaxa uu ku faafo degaannada kale ee Puntland.
Labadii sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa degaano ka tirsan koonfurta iyo Bartmaha Soomaaliya uu ku habsaday Ayaxa, isaga oo baabi’iyay dalagyo dhowr ah.
Previous articleMareykanka oo walaac ka muujiyay muranka kajira doorashada Soomaaliya
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble “ Ma aqbaleyno in qalqal geliyo amniga dalka”